Vaovao - haingon-trano rindrina famoronana fito no nanaitra ny efitrano fandraisam-bahiny reraka
Haingo rindrina famoronana fito no nanaitra ny efitrano fandraisam-bahiny reraka
Mampiasà haingo mamorona hamoha ny efitrano fandraisam-bahiny reraka. Ovay ny toerana lao sy karakaina amin'ny fampidirana haingon-trano mafana sy malaza, manao ny efitrano fandraisam-bahiny ho toerana manintona indrindra ao an-trano. Manantona entana taloha amin'ny fivarotana mora vidy amin'ny rindrin'ny galerie, manarona ny rindrina amin'ny taratasy misy modely, na mampiseho ireo fanangonana fahagola - misy fomba tsy tambo isaina hanehoana ny toetranao ary hitondranao tena ilaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ireto misy teknika fanaingoana tsotsotra 8 izay afaka manao ny efitrano fandraisam-bahiny ny toerana fanangonana malaza indrindra ao an-trano.
01Manarona ny rindrina amin'ny lamina tianao
Ny felam-boninkazo dia nanjary teboka fanombohana ny efitrano fandraisam-bahiny mamiratra. Ireo firakotra rindrina manga sy fotsy ary ireo sary aman-javakanto miloko marevaka dia atambatra amin'ny feo mifameno mba hamelomana ny toerana.
02Asehoy ny fanantonana rindrina taloha
Ny fanantonana ny rindrina amin'ny fomba fahagola mihantona amin'ny rindrina dia manova ny habaka lao sy poaka ary mahatonga ny habaka handroso kokoa.
03Mampivoara toerana malalaka ho an'ny ankizy
Ao amin'ny habakabaky ny ankizy, ny lohan'ny santionany noforonin'olombelona dia manampy toetra mahaliana amin'ny rindrina fotsy. Galerie nahantona teo amin'ny rindrina teo akaikiny, mampiseho sary sy sary pirinty momba ny fianakaviana.
04Mampiasa haingon-trano hafa
Tena lafo ny manarona ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny rindrina mirentirenty. Ny firakofana rindrina dia azo ampiasaina amin'ny toerana sasany hamoronana fahatsapana habaka voadio.
05Asehoy ny firavaka misy dikany
Safidy tsara ny misafidy kaligrafi na sary hosodoko misy dikany ary apetaka amin'ny rindrin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
06Manaova teboka fifandraisana eo anelanelan'ny kanto
Azonao atao ny manampy ny vokatra fahagola amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny fefy mihantona amin'ny rindrina, latabatra, seza ary haingon-trano Retro.
07Ataovy manintona kokoa ny rindrina
Hoy ny mpanakanto Dana Gibson: “Tsy tiako ny drywall, raha vao ataoko mahaliana kokoa izany dia vonona hanao zavatra aho.” Safidy tsara koa ny fanaingoana ny habaka amin'ny haingon-trano maro.